Jereo ny seranana misokatra miaraka amin'ny NMap sy fepetra hiarovana anay | Avy amin'ny Linux
@Jlcmux | | GNU / Linux, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Andro tsara. Androany aho manome torohevitra kely anao, ho hitantsika ireo seranana misokatra izay ananantsika. Mba hanaovana izany dia hampiasa NMap izahay ka hiroso amin'ny fametrahana azy.
avy eo hijerena ireo seranana misokatra eo amin'ny solosainao. (An-toerana)
Ireo no seranana misokatra eo an-toerana, izany hoe tsy voatery hiditra amin'ny Internet izy ireo. Raha amiko, 22 no misokatra ho an'ny ssh ary 25 ho an'ny smtp.
Raha hijery ireo seranana misokatra amin'ny pc-ko fa amin'ny internet dia manao nmap mitovy ihany aho fa amin'ny adiresy ip
Raha ny amiko dia toa misy ny mpampiantrano saingy tsy mahita seranana misokatra (1000 fotsiny no no-scan azy). Izany dia satria na dia misokatra aza ny seranana amin'ny pc-ko, ny Router no manivana azy.
Fa raha manokatra ny seranana tsirairay amin'ny router aho ...
Ny fahafahan'izy ireo mahita izay seranana misokatra amin'ny pc misy ahy dia mitera-doza amin'ny masiniko. Ka hiantohana kely ny seriveraiko ssh. Ho an'ity dia hanova ny seranana misy anao (22) ho an'ny hafa ...
Mankany amin'ny fakany aho / sns / ssh_config:
andao handeha amin'izay voalaza ao # port 22 .. mamafa ny # izahay ary manova ny seranana amin'ilay irinay ..
mikaroka amin'ny CTRL-W izahay. Mitahiry amin'ny CTRL-O izahay ary manakaiky ny CTRL-C na CTRL-X
Amin'ny ahy dia hampiasa 2222 aho
Mitovy ihany ny zavatra tadiavinay amin'ny teny hoe "port" ao anaty rakitra / Etc / ssh / sshd_config manova azy amin'ny seranana iray ihany izay hampiasaintsika. Manova izahay izao / sns / serivisy
Mitady izahay ssh ary manova ny seranana roa ho an'ny iray izay novainay teo aloha isika.
Mamerina ny serivisy izahay izao.
Ary ataontsika izany nmap indray.
Araka ny hitanao izao. Tsy misy na inona na inona momba ny serananay sy / na ny serivisy ssh.
Fa mandeha ve ilay ssh?
Zava-dehibe ny hoe raha hiditra amin'ny solosaina hafa ianao dia mazava ho azy fa tsy maintsy asehonao ny seranana ampiasainao.
ssh -p 2222 IP (Ohatra)
Angamba rehefa mampiasa seranana 2222 ny nmap dia mivoaka miaraka amin'ny zavatra miaraka amin'ny Ethernet-PC. Mitadiava seranana hafa lehibe kokoa noho ny 1000 izay tsy dia ampiasaina loatra
Raha te hahita ny lisitry ny seranana sy ny serivisy izay mandeha dia afaka mandeha ianao eto
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny nmap http://nmap.org/
Azonao atao ny manova ny seranan-tsambo misy serivisy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Jereo ny seranana misokatra miaraka amin'ny NMap ary fepetra hiarovana ny tenantsika
Misaotra amin'ny tendrony, mahaliana.
Ary amin'ny Espaniola? ha ha ha ha ha ha
Siansa io, nandramako ary tsy mifandray amin'ny internet intsony, haha, nisy namana nanampy ahy namaha azy rehefa avy namaky ilay lahatsoratra teo am-pofoany, tiany be izany ary apetrany eo amin'ny laptop-ny ny ubuntu, fony izy nilaza tamiko fa tsy ho azy.
haha tsy fantatro izay diso nataonao .. Fa nataoko mazava tsara araka izay tratra. Fa raha tianao dia afaka manao horonantsary ho anao aho. 🙂
Naaaaah, nolavina aho noho ny tambajotra sy anglisy, efa ela aho no te-hianatra ary tena tsy nahita mpampianatra iray izay manam-paharetana amiko, alao sary an-tsaina.
Ampianaro lehilahy 40 taona toa ny 10, hahahaha
haha Tsy inona izany .. Miaraka amin'ny fofonaina na zavatra hafa .. Azo antoka fa azonao ny ahy.
Tongasoa ato amin'ity hangout ity !!
Countryman, fandraisana anjara tsara.
Sahiko ny mandefa ity fanamby ity raha hijery raha tsy miseho ny seranana 2222 oO
Mihazakazaha: sudo nmap -v -sS -A -p 1-65535 localhost
PS: hiadana ny scan ... ampiako ny safidy "-v" mba tsy ho leo ianao mijery ny terminal manao na inona na inona.
Mazava ho azy raha .. Fa resaka scanner normal no lazaiko. Ny nmap dia manana safidy sy fiasa maro, mahafantatra ny fampiasana azy. tsy misy seranana afa-mandositra azy.
Ankoatr'izay dia misy làlana hatrany .. Indrindra amin'ny linux, tsy misy azo antoka tanteraka .. tendro kely fotsiny izy io: p
Ny tanjoko dia ny tsy hanao tsinontsinona ny tetika mitafy joro fa ny baikon'ny nmap avelako ho azy rehefa tsy tadidiko ny seranana izay nofidina ho soloina default dia tsara (sarotra ny mahatadidy ips sy port ...). Raha ny amiko dia tsy maintsy nifandray lavitra tamin'ny alàlan'ny VNC tamin'ny PC aho izay tsy ny seranan-dry zareo no 5900 na 5901; ny scan mahazatra dia hilaza amiko fa tsy misy seranana mihaino ny vnc ka inona ny vahaolana? Valiny: Mampiasà nmap ary tereo izy hanontany ny seranan-tsambo rehetra. 😉
Azo antoka fa tsy tafintohina lavitra aho, fantatray fa tsy azo antoka tanteraka ny zava-drehetra. Tsy misy afa-tsy ambaratonga fiarovana. Ary misy foana ny any ankoatr'izay ... misy foana ny zavatra manitsakitsaka ny filaminana. Fandraisana anjara tsara izy io, azonao atao ny manao tutorial kely momba ny nmap. 🙂 Mampamangy.
Famenon-tsakafo tonga lafatra amin'ny lahatsoratra teo aloha. Tsy haiko raha fanahy iniana no nanaovanao izany, saingy nivadika ho tsara izany. 🙂
javitopir dia hoy izy:
Tsy fiarovana afa-tsy amin'ny maizina io, indrisy miaraka amin'ny safidy -v an'ny nmap dia mampahafantatra anao izy fa ny seranana apetrakao dia mifanaraka amin'ny nmap. Raha te hiaro tena amin'ny nmap ianao dia mila mampiasa fitsipika iptables, izay tsy afaka miaro scan tanteraka. Saingy, io dia mifanohitra amin'ny hacking novices ...
Mamaly an'i javitopir
jpablo dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray, tsy azoko hoe maninona ny nmap no tsy manala ny seranan-tsambo rehefa avy nanova azy io, mitondra tandavan-seranan-tsambo ve hijerena izany?
Mamaly an'i jpablo
Eny, ny nmap amin'ny alàlan'ny fanamoriana dia mamantatra seranana 1000. Raha haintsika ny mitantana azy dia tsy ampy izany hiarovana ny ssh na serivisy hafa amin'ny fikitikitry ny nmap. Ny tsara indrindra dia ny fail2ban sy psad.
Avelao aho hanao fanitsiana amin'ny zavatra napetrakao, manitsy amin'ny ampahany aho:
"Ireto no seranana misokatra eo an-toerana, izany hoe, tsy voatery hiditra amin'ny Internet izy ireo. Raha ny amiko, misokatra ny faha 22 ho an'ny ssh ary faha-25 ho an'ny smtp."
Tsy izany no izy. Ireo no seranana izay misokatra amin'ny mpampiantrano izay hizahanao banga ao anatin'ny elanelan'ny seranana 1024 voalohany, izay ny elanelam-potoana izay novain'ny NMAP amin'ny toerana misy anao.
"Ireo no seranana misokatra eo an-toerana, izany hoe tsy voatery hiditra amin'ny Internet .."
Tokony hazavainao fa ny fomba tokana tsy "hivoahan'izy ireo" amin'ny harato dia amin'ny alalàn'ny maha-masininao ao anaty tambajotra filomanosana (ny NAT amin'ny famaritana azy dia firewall primitive) ary raha mbola tsy misokatra ny seranana amin'ny fitaovana izay ataovy NAT (mazàna ny router) ary alefaso (MANDRAY) ireo seranana ireo misokatra amin'ny masininao.
Mazava ho azy, raha mifandray mivantana amin'ny modem ilay masinina dia avoaka amin'ny harato izy.
Ho an'ny baiko navoakan'i @taregon, izay no marina hijerena sy hikitika ny seranan-tsambo iray amin'ny milina, azonao atao ny manampy, ankoatry ny safidy hafa, -sV mba hanandraman'ny nmap hahalala hoe iza no serivisy mandeha amin'ny seranana tsirairay: sudo nmap -v -sS -sV -A -p 1-65535 localhost
Manomboka ny Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) amin'ny 2012-12-06 13:39 ART
Tatitry ny scanner Nmap an'ny localhost.localdomain (127.0.0.1)
Miakatra ny mpampiantrano (latabatra 0.00021s).
Tsy aseho: seranana 999 mihidy
VERSION SERVICE STATE SERVICE
631 / tcp misokatra ipp CUPS 1.6
«Ny fahitan'izy ireo ny seranana misokatra amin'ny pc misy ahy dia mitera-doza amin'ny masiniko. Ka hiantohana kely ny seriveraiko ssh. Ho an'ity dia hanova ny seranana misy anao (22) ho an'ny hafa ...
Mandeha amin'ny faka amin'ilay / etc / ssh_config aho,
mandeha any amin'izay voalaza hoe # seranan-tsambo 22 isika .. mamafa ny # izahay ary manova ny seranana amin'ilay irinay .. »
TSIA! Zavatra iray tsy misy ifandraisany amin'ny iray hafa!
/ etc / ssh / ssh_config ihany no mitantana ny safidin'ny mpanjifa ka ny seranana apetrakao ao no ho ampiasain'ny mpanjifa ssh amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny serivisy hifandraisana amin'ireo ssh fa tsy port 22.
Ny fanovana ny seranan-tsofina tadiavinao ihany no ataonao amin'ny fanovana ny safidy voalaza ao amin'ny fisie / etc / ssh / sshd_config.
Ary farany, amin'ny alàlan'ity fitaovana an-tranonkala ity dia azontsika atao ny manandramana ny seranana inona na tsy misokatra amin'ny masininay, izay miafina, zahao raha kilemaina ny pao sy ireo zavatra hafa: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Famerenana tena tsara. tiako misaotra 😀
Fampianarana lehibe an'ny nmap
🙂 Mampamangy !!!
Sera dia hoy izy:
ry namako, misy mahalala ve ny fomba azoko atao hahalalako ny seranan-tsambo misokatra amin'ny olon-kafa ??? avy amin'ny solosainako ???
Ampiasao ny baiko: nmap XXXX
Aiza ny x's no ip an'ny solosaina hijerena
Salama, voalohany indrindra misaotra tamin'ny fizarana.
Manana olana aho, antenaiko fa afaka manampy ahy ianao: rehefa manao nmap miaraka amin'ny ip avy amin'ilay masinina iray ihany, dia manondro fa misokatra ny port 3306 ary miaraka amin'ny netstat hitako fa mihaino ny seranana; Na izany aza, rehefa manao scan amin'ny nmap avy amin'ny pc hafa dia tsy manondro ny seranana misokatra 3306.
Izaho koa dia efa nanova ny adiresy bin ho 0.0.0.0
Miezaka mampifandray rindranasa java amin'ny DB amin'ny mpizara LAMP aho ary mandeha ilay rindranasa satria efa nanao fangatahana tamin'ny pc hafa aho izay nananganako mpizara wamp hanaovana andrana ary ok daholo ny zava-drehetra.
Misy hevitra ve? Tsy hitako izay hatao hafa
Ahoana ny fanavaozana ny GNOME 3 amin'ny Ubuntu
Maimaimpoana ny Office 2013 mandritra ny 2 volana